Brazing Brass Fittings Na Induction kpo oku kpo oku
Brass Brass Fittings Na Induction
Ebumnuche: Iji kpoo mgbakọ ígwè tubing na 750 Celsius maka ngwa brazing. Ọnụ mmiri tubing dị iche na 3 ka 8 sentimita (76.2 ka 203.2 mm)
Ihe: Brass tubing Brass flange Braze rings Braze flux
Okpomọkụ: 1382 ° F (750 Celsius C)
200 kHz ugboro ugboro
Ngwá ọrụ DW-UHF-20KW, 150-500 kHz na-emepụta ọkụ ọkụ ọkụ, nke nwere ebe okpomọkụ dịpụrụ adịpụ nwere oghere elekere asatọ 1.0 μF (ngụkọta 2.0 μF). A na-emepụta ikuku ọkụ ọkụ na-agbagharị ọtụtụ okpukpu abụọ nke a na-eji ọkụ ọkụ emepụta ma mepụtara kpọmkwem maka ngwa a.
Usoro A na-akwatu akụkụ ndị ahụ. A na-ekpocha njikọ niile ma na-agbanye mgbatị na mpaghara dum nke mgbakọ ahụ. Tupu ikpọkọta akụkụ ahụ, ihe eji emepụta ihe na-eme ka a ghara ịkụnye ya. A na-etinye njikọ ụkwụ ahụ n'elu tubes ọla. A na-ekwe ka mgbatị na akụkụ ahụ kpoo ọkụ tupu ekpo ọkụ. A na-etinye ike ọkụ ikuku ọkụ ruo mgbe ọkpụkpụ ahụ na-aga nke ọma na nkwonkwo. Nzukọ ahụ na-eri nri nke ọma na 1382 Celsius F (750 Celsius C) ma gbazee ogwe aka ahụ na gburugburu tube. Oge na-ekpo ọkụ bụ ọtụtụ minit na-adabere na flange.
Nsonaazụ / Bara Uru Igbe ahụ na-enye ohere ikpo ọkụ na arụmọrụ kachasị mma nke na-ebelata oge okirikiri na ihe a na-ekpo ọkụ na tubes.
Categories Technologies Tags Brass Brass Fittings Na Induction, Ejiri ike brazing nke ukwu, brazing brass brave, Brauzim Brau Induction dị, Igwe eji ọla ọcha eme ndọta, RF bradu ọla nchara Mail igodo
Ngwunye Copper Copper na-eme ka Brazing thin
Ogwe osisi na-ebugharị na brazing